Archive du 20200907
Fidiran’ny mpianatra Misafidy izay daty tiany ny sekoly tsy miankina
Efa miditra avokoa ny ankamaroan’ny sekoly tsy miankina, dia ireo manaraka ny fandaharam-pianarana Frantsay sy Anglisy.
Tany misy ny orinasa ALMA Hisy fananganan-javatra ataon’ny CUA
Namoaka ampahibemaso tao amin’ny tambajotran-tserasera ny fihaonana tamin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo ny tolakandron’ny sabotsy lasa teo ny Mpanolontsaina Monisipaly avy amin’ny Komba Rtoa Hilda Hasinjo Ravelonahana.
Andry Rajoelina “Tsy hanalava ny fotoam-piasako izany aho”
Tsy manana eritreritra hanalava ny fe-potoana iasako aho, fa ny imasoako dia fanatanterahana fotodrafitrasa, hoy i Andry Rajoelina Filoham-pirenena omaly eo anatrehan’ny fihazakazahana nampivory ny parlemantera handany ny didy hitsivolana noraisiny.
Hetra manara-penitra Hakan’ny CUA 1500 Ar/m² ny fandokoana trano
Ny pitsopitsony sy fombafomba ahazoana ny fankatoavan’ny Prefektioran ’ Antananarivo sisa andrasana, dia hihantra ny teti-bola nasiam-panitsian’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Famotehana ny mpandraharaha Malagasy Manaratsy endrika ny filoham-pirenena
Naman’ny kofona tanteraka ankehitriny ireo mpandraharaha Malagasy, raha mijery ny fanapahan-kevitra noraisin’izy ireo tao anatin’izay 5 volana sy tapany izay.
Famerenana ny “Iles Eparses” Tsy vitan’ny hafanam-po fotsiny
Nivoaka iny ny fanapahan-kevitra noraisin` ny loholona Frantsay fa mitsipaka ny famerenana tanteraka ireo nosy miparitaka na « Iles Eparses ». Mazava ny azy fa an` ny frantsay ireo nosy ireo.
Polisy teny Isoraka Nahatifitra tsy nahy ny namany ilay polisy
Polisy mpiana-draharaha iray miasa ao kaomisarian’ny polisin’ny boriborintany fahaefatra isotry no nahatifitra tsy nahy ny namany sivily iray teo amin’ny lohany ka nahafaty ity farany, ny harivan'ny sabotsy05 septambra teo teny Isoraka.
Famoahana vonjimaika an-dRavelonanosy Nanao antso avo ireo zanany 5 mianadahy
Efa-bolana katroka izao no nitazonana an-dRavelonanosy Bruno any am-ponja hoy ireo zanany 5 mianadahy.
« Ericsson Innovation Awards 2020 » Hisokatra ho an’ny tanora maneran-tany
Misokatra ny fifaninana lehibe : « Ericsson Innovation Awards » na « EIA 2020 » karakarain’ny orinasa Ericsson.
Rafitry ny fonja Malagasy Mila vahaolana maika
Nanao antso ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin’ny fampiroboroboana sy fiarovana ny zon’olombelona eto Madagasikara fa maika ny fanavaozana ny rafitry ny fonja eto amintsika.
ANDASIBE Nisokatra tamin’ny sabotsy ny valan-javaboahary
Nisokatra tamim-pomba ofisialy nanomboka ny sabotsy teo ny valan-javaboarahin’i Mantadia ao Andasibe any amin’ny lalam-pirenena faharoa taorian’ny 5 volana nikatonany vokatry ny fiparitahan’ny valan’aretina coronavirus teto amintsika.
Fianakaviana Ravalomanana Vita batisa ny zafikely fahaefatra
Nahazo fahasoavana ny fianankaviana Ravalomanana. Tontosa teny amin’ny FJKM Imerikasinina omaly alahady 06 septambra 2020 ny batisan’I Timoty
Zo tsy azo henjehina Mila mahaleotena ilay vaomiera
Efa niroso tamin` ny fananganana ny vaomiera hisahana ny fanesorana ny zo tsy azo henjehina an` ireo solombavambahoaka na “commission de levée parlementaire” ny teo anivon` ny Antenimieram-pirenena.
Mpamosavy malemy ?
Nanamarika iny faran’ny herinandro ny hetsiky ny tantsaha tany Vakinankaratra naneho ny alahelony momba ny fikatonan’ny orinasa mpandray vokatra sy ny dian’ny Filoham-pirenena nihazo iny ilany antsinana sy avaratry ny Nosy iny.
Tsy nanao aroloha Mpitondra moto70 indray no tratran’ny polisy
Nifanesy tato ho ato ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny moto teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Roa isan’andro izany raha kely.
Zotra Nasionaly Hisokatra ny RN 1, RN 4, RN 7…
Mitohy ny fisokafan’ny zotra Antananarivo-Toamasina, manomboka misokatra amin’ny zoma 11 septambra ny zotra Antananarivo-Toliara (RN 7) sy izay lalovany rehetra satria efa voafehy ny valanaretina, hoy ny Filoham-pirenena.
Vokatra eto Madagasikara Ny vahiny indray no mahazo tombony
Manankarena i Madagasikara na harena voajanahary na harena an-kibon` ny tany. Maro ihany koa ireo vokatra hafa toy ny ny jirofo,ny kafe, ny lavanila…
Madagasikara Miloko politika ny fanabeazana…
Isan’ny nitsikerana ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, ny endriky ny vola 10.000 ariary ho lokon’ny antoko politikany. Toy izany koa ny nanjo ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny vola 20.000 ariary.
Mpianatra tany Sina Nody maina an-tanindrazana
Voatery nody an-tanindrazana ny 90%n` ny mpianatra Malagasy nandranto fianarana tany Sina.
Avaradrano 78,46 % ny taham-pahafahana CEPE
Nivoaka omaly alahady maraina ny voka-panadinana CEPE ho an’ny fari-piadidiam-pampianarana Avaradrano, taorian’ny fankatoavana nataon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena.
Alasora Efa mpamerin-keloka ilay mpamaky trano tratra
Ny 03 septambra lasa teo dia lehilahy iray no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny CSP Alasora teny amin’ny fari-piadidiany noho ny halatra mitam-piadiana.
Vakinankaratra Tezitra amin’ny fanjakana ny tantsaha
Fihetsika hafa kely nitondra hafatra no nentin’ireo tantsaha mpiompy mpamokatra ronona tany Vakinankaratra naneho ny alahelony ny sabotsy lasa teo.
JIRAMA Mandroso ny asa fanoloana ireo fantsona tranainy
Mandroso ny asa fanoloana ireo fantson-dranon’ny JIRAMA tranainy sy manary rano eny amin’ny Fokontany Anjanahary II O, izay fiaraha-miasan'ny JIRAMA sy ny orinasa Afrika Tatsimo TRG International.
Bongatsara ` Mbola tsy nisy ny fizarana fanampiana
Tapitra anio (TTF : ny sabotsy teo) ny fizarana ny fanampiana ny vahoaka izay nianjadian'ny fihibohana nandritra izay telo volana izay, hoy ny filohan’ny fikambanana Tanora mandray andraikitra, Tsiry Andriamihantasoa.
Fanalefahana ireo fepetra Misokatra ny Fiangonana, Restaurant, Bar, Karaoke,…
Tsy maintsy manao arovaorona ny rehetra rehefa mivoaka ny trano. Mitohy ny sazy ho an’izay tsy manao izany.
Coronavirus Tafiakatra 200 ny maty
Miisa 2 ny olona lavon’ny coronavirus nandritra iny faran’ny herinandro iny, ka ny iray teto Analamanga ny sabotsy teo, ary iray hafa kosa tany amin’ny Faritra Antsinanana omaly alahady, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta.
Ady amin’ny Coronavirus Tonga ny fanampiana avy any Egypte
Notsenaina sy noraisina omaly 06 septambra teny amin’ny Seranam-piaramanidina Ivato ny anjara fanampiana ho an’i Madagasikara avy amin’ny Governemanta Ejiptianina tarihin’ny Filohan’ny Abdel Fattah EL Sisi.